Tofu uye kolifulawa curry nemupunga | Bezzia
Tofu nekolifulawa curry nemupunga
Maria vazquez | 06/04/2021 10:00 | Salads uye miriwo
KuBezzia mazuva ese anodarika tinofarira curry yakawanda, zvinoitika zvakafanana kwauri? Iyo huku uye mbatatari curry izvo isu takagovana newe kusvika makore matatu apfuura imwe yezvatinodisisa uye isu takazvisimbisa pazvo kugadzira izvi vegan vhezheni: tofu uye kolifulawa curry.
Iyo huku yakatsiviwa mune ino vhezheni ne tofu uye mimwe miriwo kuwedzera kune iro rinotapira mbatatisi yakaverengerwa mune yekubheka. Muchidimbu ichi curry haina kana munhu anoifukidza nayo. Ino nguva hatina kuwedzera madomasi kana chimwewo chinongedzo chinoshandura vara rayo kana kunaka.
Chanhasi ndiro rakasimba uye rakakwana ndiro, yakakwana kushanda seimwe chete ndiro. Kugadzirira kwayo kuri nyore uye hakuzokutore iwe anopfuura maminetsi makumi mana. Zano rangu nderekuti iwe tora mukana uye uwane zvakakwana kwemazuva maviri. Saka unogona kuidya rimwe zuva nemupunga uye wozodya kudya kunotevera uye zvinokubhadharira zvakafanana. Iwe unotsunga kuzviedza here?
400 g. tofu, akachekwa
1/4 tsvuku bhero mhiripiri, akachekwa
1/2 koliflower, mu florets
1 mbatata, yakachekwa
350 ml. mukaka wekokonati
2 mashupuni curry poda
1 teaspoon yetaprika inotapira
1/3 maaspuni pasi kumini
1 teaspoon ye cornstarch yakanyungudutswa mu 1/2 girazi remvura
1 mukombe wemupunga wakabikwa
Gadzirira zvese zvinoshandiswa.
Pisa mapuniko maviri emafuta mupoto uye saute the yakarongeka tofu 8 maminetsi kana kusvika zvishoma browned. Kana wapedza, bvisa kubva pani uye chengetedza.
Mumafuta mamwe chete Zvino furaya hanyanisi uye mhiripiri mukati memaminitsi makumi maviri.
Pashure Shingairira muholiflower uye mbatata, vhara iyo casserole uye varege vabike pamusoro pekupisa kwepakati kwemaminitsi 8-10.
Mushure memaminitsi mana wedzera mukaka wekokonati, zvinonhuwira, chibage uye sanganisa. Pheka iyo yose kwemaminitsi mashanu kusvika kugumi kana kusvika mbatatisi iri nyoro.
Shumira iyo tofu uye kolifulawa curry nemupunga wakabikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Salads uye miriwo » Tofu nekolifulawa curry nemupunga
Makanaka uye anoshanda echinyorwa anodonhedza kofi vagadziri
Hutsika hunhu hunogona kupedza vaviri vacho